Jaamacadda Banaadir oo heshiis la gashay Jaamacad ku taalla Taliyaaniga – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Jaamacadda Banaadir oo heshiis la gashay Jaamacad ku taalla Taliyaaniga
A warsame 25 February 2015
Mareeg.com: Jaamacadda Banaadir ee fadhigeedu yahay caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho ayaa heshiis iskaashi la gashay jaamacad ku taalla dalka Taliyaaniga.
Kulan dhexmaray mas’uuliyiin ka kala socday Jaamacadaha Banaadir iyo Palermo oo ka dhacay xarunta Jaamacada Palermo ee dalka Talyaaniga, iyadoo labada jaamacadood ay kala saxiixdeen heshiis iskaashi.
Kulanka waxaa si diirran loogu soo dhaweeyay, Prof. Cusmaan Maxamuud (Dufle) oo ah guddoomiya guddiga adeegga Bulshada ee baarlamanka FS oo booqasho ku jooga Talyaaniga, isla markaana wakiil ka ahaa guddoomiyaha Jaamacadda Banaadir, Dr. C/risaaq Axmed Dalmar.
Sidoo kale, dhanka Jaamacadda Palermo waxaa kulankaas uga qayb-galay guddoomiyaha jaamacaddaas, Prof. Roberto La Galla iyo ma’uuliyiin kale oo Jaamacadda ka tirsan.
Mas’uuliyiinta labada jaamacadood ayaa falanqeyn dheer kaddib waxay isla gaareen inay yeeshaan wadashaqayn iyo iskaashi joogto ah oo ku salaysan tayeynta macalimiinta, cilmi-baarista, waxbarashada ardayda, is-dhaafsiga aqoonta iyo wixii u dan ah labada Jaamacadood.
Gunaanadkii kulanka ayaa waxaa ka hadlay madaxa Jaamacadda Palermo oo hambalyo iyo bogaadin u soo jeediyay dhammaan mas’uuliyiinta Jaamacada Banaadir doorka ay kaga jiraan horumarinta waxbarashada Soomaaliya.
Prof. Roberto ayaa ku boorriyay Jaamacadda Banaadir inay halkaas kasii wado dadaal-keeda, isagoo xusay in jaamacadda Palermo ay diyaar u tahay xoojinta iskaashiga kala dhexeeya Jaamacadda Banaadir.
Ugu dambeyn, Prof. Cismaan Dufle oo isna hadal jeediyay ayaa mas’uuliyiinta Jaamacada Palermo uga mahad-celiyay sida diirran ee ay u soo dhaweeyeen; isagoo warbixin ka siiyay howlaha Jaamacadda Banaadir iyo kaalinta ay kaga jirto waxbarashada dalka.
Gudoomiyaha Wakiilada Somaliland oo qaba in la hakiyo wadahadalka
Muqdisho: Nin Studio heesaha lagu duubo ku lahaa Howl Wadaag oo goobtiisa lagu gubay